Abantu ababini babulawa, ababini balimala eArizona Amtrak
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abantu ababini babulawa, ababini balimala eArizona Amtrak
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Amalungu eqela lengingqi yomsebenzi we-narcotic kunye nabasemagunyeni basekuhlaleni kunye nabasemagunyeni, bebeqhuba isheke esiqhelekileyo kuloliwe omileyo xa kudutyulwa.
Amagosa onyanzeliso lomthetho aqhuba uhlolo oluqhelekileyo kuloliwe waseAmtrak xa kwenzeka ukudubula.
Elinye igosa lezomthetho kunye nomrhanelwa owayedubule wabhubha kudutyulo lwesikhululo sikaloliwe iTucson.
Akukho kufa okanye ukonzakala okuxeliweyo phakathi kwabagibeli bakaloliwe abali-137 kunye nabasebenzi kaloliwe abali-11.
Ukudubula ngaphakathi koololiwe i-Amtrak kumile kwisikhululo sikaloliwe eArizona kushiye abantu ababhubhileyo kwaye ababini bonzakele.
Abasemagunyeni abancinci banyuka uloliwe waseAmtrak osuka eNew Orleans osuka eLos Angeles wema kwisikhululo esikumbindi wedolophu yaseTucson ukuba enze uhlolo oluqhelekileyo lwemipu engekho mthethweni, iziyobisi kunye nemali.
Amagosa onyanzeliso lomthetho adibana nabantu ababini kwinqanaba lesibini loololiwe abanemigangatho emibini kwaye bezama ukubamba omnye wabo, xa umrhanelwa wakhupha umpu ovulekileyo wadubula.
I-arhente yolawulo lokunyanzeliswa kweziyobisi (i-DEA) yabulawa ngokudutyulwa, kwaye enye iarhente yenzakala kwaye ikwimeko embi. Ipolisa laseTucson elileqe ukuyo kunceda emva kokuva kudutyulwa kwagqitywa nalo lenzakele, kodwa likwimeko entle.
Emva kokutshintshiselana ngemipu kunye namagosa, umhlaseli wayzivalela ngaphakathi kwigumbi langasese likaloliwe. Ekugqibeleni, ii-arhente zogcino-mthetho zichonge ukuba umrhanelwa kwigumbi lokuhlambela akasekho. Akucaci ngalo mzuzu ukuba ngaba iiarhente zamdubula okanye wazibulala.
Akukho monakalo uxeliweyo phakathi kwabagibeli abayi-137 kunye nabasebenzi abali-11 ababekhwele ebhodini Amtrak uloliwe abakhutshwe esitishini.
Umrhanelwa wokuqala obevalelwe uhleli eluvalelweni lwamapolisa. Akukho barhanelwa bachongiweyo ngabezomthetho.